किन पिउनु हुँदैन पानी पनि धेरै ? « Kakharaa
१६ असार, एजेन्सी । दिनभरि घाममा हिँडेपछि हामी सबैलाई तिर्खा लाग्छ । त्यो तिर्खा मेटाउन हामी पानी पिउने गर्छौँ । पानीले हामीलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ । हामीले विभिन्न किताबहरुमा पनि पानीको फाइदाहरुका बारेमा पढेका छौँ । तर कहिले काहीँ हाम्रा ठूलाबडाले पनि हामीलाई धेरै पानी पिउने सल्लाह दिनुहुन्छ । के पानी धेरै मात्रामा पिउन सम्भव छ त ? अरु कुरा जस्तै पानी पनि धेरै खाँदा त्यसले हामीलाई असर त गर्दैन ? यो कुरा सबैको चाँसो विषय हुन सक्छ ।
फ्लोरिडा विश्वविद्यालय न्र्तगत रहेको कलेज अफ हेल्थ एण्ड ह्युमन पर्फमेन्सले पहिले गरेको एक अध्ययनमा म्याराथोन तथा ट्राइएथ्लेटहरुमा वाटर इन्टोक्सिकेसन वा हाइपोएटर्मिया नामक समस्या देखा पर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । करिब १८ प्रतिशत घावक र साइकल चालकलाई यो समस्या देखापर्ने गरेको पाइएको छ ।
१० असार, एजेन्सी । समाचारअनुसार प्रेमको यस्तै एक उदाहरण फिलिपिन्सको मनिलामा भेटियो । यहाँ, एक